Frank| May 9, 2019 | English
ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာ ပြောဆိုနေထိုင်ရေးမှာ ဘာသာစကားက တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အရေးပါလှပါတယ်။ စာပေ၊ ဘာသာစကားတွေက နိုင်ငံ၊ လူမျိုးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို မီးမောင်းထိုးပြနိုင်တယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အစဉ်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲလာတာနှင့်အညီ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားကို လေ့လာသူ အမြောက်အမြားရှိကြပါတယ်။
ဘာသာစကားတွေကို စကားလုံးတွေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် ကျစ်လျစ်စွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ဒီလို တည်ဆောက်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အင်္ဂါရပ်အချို့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအင်္ဂါရပ်အချို့ကို ဝါစင်္ကဆိုပြီး တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့က အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာလည်း အဓိကကျတဲ့ ဝါစင်္ဂ (၈) မျိုးအကြောင်းကို တင်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါစင်္ဂ (၈) မျိုးကတော့
၁။ Noun (နာမ်)
၂။ Pronoun (နာမ်စား)
၃။ Adjective (နာမဝိသေသန)
၄။ Verb (ကြိယာ)
၅။ Adverb (ကြိယာဝိသေသန)
၆။ Preposition (ဝိဘတ်)
၇။ Conjunction (သမ္ဗန္ဓ)
၈။ Interjection (အာမေဋိတ်) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ရှိသက်မဲ့၊ ဒြပ်ရှိုဒြပ်မဲ့တို့၏ အမည်ဟူသမျှကို Noun (နာမ်) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အများစုရဲ့ ရှေ့မှာ “a” “an” “the” ထည့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ။ Ah! I wish me and my girlfriend travel to Europe yearly and visit all amazing sites.
ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် Noun (နာမ်) တွေက “girlfriend”, “Europe”, “sites” တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Noun (နာမ်) ကို Pronoun (နာမ်စား) နဲ့ အစားထိုးသုံးလို့ရပါတယ်။
ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် “I”, “me” နဲ့ “my” က Pronoun (နာမ်စား) တွေဖြစ်ပါတယ်။
Adjective (နာမဝိသေသန) က Noun (နာမ်) ကို ပိုပြီး ထူးခြားစေချင်တယ်၊ ပေါ်လွင်စေချင်တယ် ဆိုရင် Adjective (နာမဝိသေသန) ကို သုံးကြပါတယ်။
ဥပမာ စာကြောင်းမှာဆိုရင် sites ဆိုတဲ့ Noun (နာမ်) ကို ပိုပြီး ပေါ်လွင်စေချင်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ “amazing” နဲ့ “all” ဆိုတဲ့ Adjective (နာမဝိသေသန) ကို သုံးလိုက်ပါတယ်။
Verb (ကြိယာ) ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ သူ့ဘာသာ ဖြစ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ရှိခြင်း၊ ဖြစ်တည်ခြင်းတဲ့ အရာတွေကို ဖော်ပြတဲ့ ပုဒ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဥပမာ စာကြောင်းမှာဆိုရင် “wish”, “travel” နဲ့ “visit” တို့က ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်း အမူအရာကို ပြတဲ့ ကြိယာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Adverb (ကြိယာဝိသေသန) က နာမဝိသေသန နဲ့ ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ Adverb (ကြိယာဝိသေသန) က Verb (ကြိယာ) ကို ပိုပြီး လေးနက်စေချင်တဲ့အခါ အသုံးပြုပါတယ်။
ဥပမာ စာကြောင်းမှာဆိုရင် travel ဆိုတဲ့ ခရီးထွက်ခြင်းဆိုတဲ့ (ကြိယာ) ကို ဘယ်လို သွားချင်တာလဲဆိုပြီး ပိုပြီးလေးနက်စေချင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ “yearly”ဆိုတဲ့ Adverb (ကြိယာဝိသေသန) ကို အသုံးပြုပါတယ်။
Preposition (ဝိဘတ်) ကတော့ Noun(နာမ်စား)၊ Pronoun (နာမ်စား)၊ Verb (ကြိယာ) ရဲ့ နောက်မှာ ရှိကြပါတယ်။ Preposition (ဝိဘတ်) က ရှေ့ကပုဒ်ကို ပိုပြီးလေးနက်စေပြီး နောက်က ပုဒ်ကို ဆက်စပ်အထူးပြုပေးပါတယ်။
ဥပမာ စာကြောင်းမှာဆိုရင် “to” ဆိုတဲ့ Preposition (ဝိဘတ်) က ရှေ့က “Travel” ဆိုတဲ့ Verb ကို ပိုပြီးလေးနက်စေပြီး နောက်က “Europe” ဆိုတဲ့ Noun နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အထူးပြုပေးပါတယ်။
Conjunction (သမ္ဗန္ဓ) က ပုဒ်အချင်းချင်း (ဒါမမဟုတ်) ဝါကျအချင်းချင်း (သို့မဟုတ်) အဓိပ္ပါယ်အချင်းချင်း ဆက်စပ်ပေးပါတယ်။
ဥပမာမှာဆိုရင် Conjunction ဖြစ်တဲ့ “and” ကို “me” ဆိုတဲ့ “pronoun” နဲ့ “my girlfriend” ဆိုတဲ့ “noun” ဖြစ်တဲ့ ပုဒ်နှစ်ခုကို ဆက်စပ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက် “and” တစ်လုံးက အရှေ့က စာကြောင်းနဲ့ အနောက်က စာကြောင်းနှစ်ခုကို ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ Interjection ( အာမေဋိတ်)
Interjection ( အာမေဋိတ်) ကတော့ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း၊ အံ့ဩခြင်းစတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး နှုတ်မှ ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အသံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ စာကြောင်း အစမှာ “Ah!” ဆိုတဲ့ အာမေဋိတ်ကို ထည့်ထားတာ တွေ့ရမှာပါ။
ဥပမာ စာကြောင်းမှာ ဝါစင်္က (၈) မျိုးလုံးပါပြီး နားလည်ရလွယ်ကူအောင် ရေးသားထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးလေးကတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာနေတဲ့ သူတွေအတွက်ရော၊ နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ အသံဝင်စေမယ့် ဝါစင်္က (၈) မျိုး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတို့ ဝါစင်္က (၈) မျိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးနိုင်ပြီး အကျိုးရှိစေနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကြှနျတျောတို့တှေ နစေ့ဉျလှုပျရှားသှားလာ ပွောဆိုနထေိုငျရေးမှာ ဘာသာစကားက တဈထောငျ့တဈနရောကနေ အရေးပါလှပါတယျ။ စာပေ၊ ဘာသာစကားတှကေ နိုငျငံ၊ လူမြိုးနဲ့ ယဉျကြေးမှုကို မီးမောငျးထိုးပွနိုငျတယျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ အစဉျနဲ့အမြှ ပွောငျးလဲလာတာနှငျ့အညီ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံမှာလညျး အင်ျဂလိပျဘာသာ စကားကို လလေ့ာသူ အမွောကျအမွားရှိကွပါတယျ။
ဘာသာစကားတှကေို စကားလုံးတှနေဲ့ အဓိပ်ပါယျရှိအောငျ ကဈြလဈြစှာဖှဲ့စညျးတညျဆောကျထားတာပါ။ ဒီလို တညျဆောကျရာမှာ လိုအပျတဲ့ အင်ျဂါရပျအခြို့ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီအင်ျဂါရပျအခြို့ကို ဝါစင်ျကဆိုပွီး တငျစားချေါဝျေါကွပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ကြှနျတျောတို့က အင်ျဂလိပျဘာသာစကားမှာလညျး အဓိကကတြဲ့ ဝါစင်ျဂ (၈) မြိုးအကွောငျးကို တငျပွပေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဝါစင်ျဂ (၈) မြိုးကတော့
၁။ Noun (နာမျ)
၂။ Pronoun (နာမျစား)
၃။ Adjective (နာမဝိသသေန)
၄။ Verb (ကွိယာ)
၅။ Adverb (ကွိယာဝိသသေန)
၆။ Preposition (ဝိဘတျ)
၇။ Conjunction (သမ်ဗန်ဓ)
၈။ Interjection (အာမဋေိတျ) တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သကျရှိသကျမဲ့၊ ဒွပျရှိုဒွပျမဲ့တို့၏ အမညျဟူသမြှကို Noun (နာမျ) လို့ ချေါကွပါတယျ။ အမြားစုရဲ့ ရှမှေ့ာ “a” “an” “the” ထညျ့သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
ဒီစာကွောငျးမှာဆိုရငျ Noun (နာမျ) တှကေ “girlfriend”, “Europe”, “sites” တို့ ဖွဈပါတယျ။
Noun (နာမျ) ကို Pronoun (နာမျစား) နဲ့ အစားထိုးသုံးလို့ရပါတယျ။
ဒီစာကွောငျးမှာဆိုရငျ “I”, “me” နဲ့ “my” က Pronoun (နာမျစား) တှဖွေဈပါတယျ။
Adjective (နာမဝိသသေန) က Noun (နာမျ) ကို ပိုပွီး ထူးခွားစခေငျြတယျ၊ ပျေါလှငျစခေငျြတယျ ဆိုရငျ Adjective (နာမဝိသသေန) ကို သုံးကွပါတယျ။
ဥပမာ စာကွောငျးမှာဆိုရငျ sites ဆိုတဲ့ Noun (နာမျ) ကို ပိုပွီး ပျေါလှငျစခေငျြတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျောတို့ “amazing” နဲ့ “all” ဆိုတဲ့ Adjective (နာမဝိသသေန) ကို သုံးလိုကျပါတယျ။
Verb (ကွိယာ) ကတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပွုမူဆောငျရှကျမှုတှေ၊ သူ့ဘာသာ ဖွဈနတေဲ့ လှုပျရှားမှုတှနေဲ့ ရှိခွငျး၊ ဖွဈတညျခွငျးတဲ့ အရာတှကေို ဖျောပွတဲ့ ပုဒျတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီ ဥပမာ စာကွောငျးမှာဆိုရငျ “wish”, “travel” နဲ့ “visit” တို့က ပွုမူဆောငျရှကျခွငျး အမူအရာကို ပွတဲ့ ကွိယာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Adverb (ကွိယာဝိသသေန) က နာမဝိသသေန နဲ့ ဆငျဆငျတူပါတယျ။ Adverb (ကွိယာဝိသသေန) က Verb (ကွိယာ) ကို ပိုပွီး လေးနကျစခေငျြတဲ့အခါ အသုံးပွုပါတယျ။
ဥပမာ စာကွောငျးမှာဆိုရငျ travel ဆိုတဲ့ ခရီးထှကျခွငျးဆိုတဲ့ (ကွိယာ) ကို ဘယျလို သှားခငျြတာလဲဆိုပွီး ပိုပွီးလေးနကျစခေငျြတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ “yearly”ဆိုတဲ့ Adverb (ကွိယာဝိသသေန) ကို အသုံးပွုပါတယျ။
Preposition (ဝိဘတျ) ကတော့ Noun(နာမျစား)၊ Pronoun (နာမျစား)၊ Verb (ကွိယာ) ရဲ့ နောကျမှာ ရှိကွပါတယျ။ Preposition (ဝိဘတျ) က ရှကေ့ပုဒျကို ပိုပွီးလေးနကျစပွေီး နောကျက ပုဒျကို ဆကျစပျအထူးပွုပေးပါတယျ။
ဥပမာ စာကွောငျးမှာဆိုရငျ “to” ဆိုတဲ့ Preposition (ဝိဘတျ) က ရှကေ့ “Travel” ဆိုတဲ့ Verb ကို ပိုပွီးလေးနကျစပွေီး နောကျက “Europe” ဆိုတဲ့ Noun နဲ့ ဆကျစပျပွီး အထူးပွုပေးပါတယျ။
Conjunction (သမ်ဗန်ဓ) က ပုဒျအခငျြးခငျြး (ဒါမမဟုတျ) ဝါကအြခငျြးခငျြး (သို့မဟုတျ) အဓိပ်ပါယျအခငျြးခငျြး ဆကျစပျပေးပါတယျ။
ဥပမာမှာဆိုရငျ Conjunction ဖွဈတဲ့ “and” ကို “me” ဆိုတဲ့ “pronoun” နဲ့ “my girlfriend” ဆိုတဲ့ “noun” ဖွဈတဲ့ ပုဒျနှဈခုကို ဆကျစပျထားပါတယျ။ ပွီးတော့ နောကျ “and” တဈလုံးက အရှကေ့ စာကွောငျးနဲ့ အနောကျက စာကွောငျးနှဈခုကို ဆကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
၈။ Interjection ( အာမဋေိတျ)
Interjection ( အာမဋေိတျ) ကတော့ ထိတျလနျ့ခွငျး၊ ဝမျးသာခွငျး၊ အံ့ဩခွငျးစတဲ့ တဈစုံတဈခုသော အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ စိတျလှုပျရှားပွီး နှုတျမှ ရုတျတရကျ ထှကျပျေါလာတဲ့ အသံပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ စာကွောငျး အစမှာ “Ah!” ဆိုတဲ့ အာမဋေိတျကို ထညျ့ထားတာ တှရေ့မှာပါ။
ဥပမာ စာကွောငျးမှာ ဝါစင်ျက (၈) မြိုးလုံးပါပွီး နားလညျရလှယျကူအောငျ ရေးသားထားပါတယျ ခငျဗြာ။ အပျေါမှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ ဆောငျးပါးလေးကတော့ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားလလေ့ာနတေဲ့ သူတှအေတှကျရော၊ နစေ့ဉျသုံးနတေဲ့ သူတှအေတှကျပါ အသံဝငျစမေယျ့ ဝါစင်ျက (၈) မြိုး အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ခငျဗြာ။ သူငယျခငျြးတို့ ဝါစင်ျက (၈) မြိုးကို မှနျမှနျကနျကနျ သုံးနိုငျပွီး အကြိုးရှိစနေိုငျမယျလို့ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့ပါတယျခငျဗြာ။
Frank| May 1, 2019